विविध टर्की भोजन
यो धेरै विविध छ र स्वाद को धेरै छ किनभने टर्की भोजन संसारको सबैभन्दा विविध व्यञ्जनहरु को एक मानिन्छ। हरेक टर्की महिला उनको रहस्य थाह छ। टर्की पुस्ता देखि पुस्ता गर्न खाना पकाउने को रहस्य स्थानान्तरण गर्न स्वीकार गरे।
appetizers, सलाद, स्वादिष्ट डेसर्ट: तपाईं सबै कुरा पाउन सक्नुहुन्छ व्यञ्जन को विविधता बीच। त्यहाँ घरमा तयार हुन सक्छ जो व्यञ्जन, हो, र त्यहाँ मात्र त्यस्तो BAKLAVA रूपमा आफ्नो क्षेत्रमा व्यवसायीक र विशेषज्ञहरु, विषय भएकाहरूलाई छन्। टर्की को हरेक क्षेत्र मा आफ्नो हस्ताक्षर व्यञ्जन तयार छन्।
यसलाई टर्की भोजन धेरै मसालेदार छ कि विश्वास छ र बोसो संग दखल गर्नू, तर यो छैन। वास्तवमा, यो जीव लागि धेरै उपयोगी छ। प्रत्येक पकवान ठिक्क आफ्नो मसला प्रयोग को लागि। Seasonings छैन केवल स्वाद दिनकै तर पनि पाचन सुधार गर्छ। टर्की भोजन आफ्नो स्वास्थ्य पछि जो vegetarians र मान्छे को लागि आदर्श छ। त्यसैले टर्की गर्न पर्यटन मान्छे आफ्नो पेट सफा गर्न चाहने लागि उपयोगी छन्।
टर्की होटल प्रणाली "सबै समावेशी" मा काम गर्छन। जो टर्की गर्न यात्राको लिए ती होटल प्रस्ताव छ कि खाना, यो प्रामाणिक टर्की भोजन को एक नमूना लिन आवश्यक छैन छ कि भूल हुँदैन। यो केवल एक स्थानीय खाना वस्तुहरू छ र विशेष पर्यटकहरुका लागि डिजाइन। कारण लागि प्रयोग गरिन्छ जो उत्पादन, को प्रकृति राष्ट्रिय भोजन, सबै भाँडा अन्य देशहरूमा तयार गर्न सकिन्छ।
प्रत्येक देश नास्ता मा सामान्यतया केही खाद्य पदार्थ सेवा छ। रूस मा, उदाहरणका लागि - युरोप साधारण नास्ता अनाज र दूध, टर्की नास्ता तर मा अनाज विभिन्न खाद्य उत्पादनहरु को एक ठूलो संख्या सेवा। बिहान भोजन समयमा टर्की डेस्क, तपाईं सधैं मह र जाम र पनि स्ट्यु को रूप मा सेतो चीज, अर्थात् पनीर, जैतून, तेल, विभिन्न तरकारी, रोटी, मिठाई देख्न सक्छौं। नास्ता थप बाक्लो हुन योजना छ भने, यो sausages र भद्रगोल अन्डा ग्रील्ड सेवा छ। नियम, satiety एक नास्ता पछि दिन को एक ठूलो भाग रहनेछ।
पिउने चिया को रूप मा एउटा सानो गिलास मा परंपरागत सेवा छ। टर्की चिया तिर्खा मेट्न मद्दत गर्छ। परम्परा द्वारा एक "डबल-तल्ले" चायदानी मा पीसा स्थानीय चिया: एक teapot दोस्रो नौका तल गरम छ। तपाईं यो परम्परा आनन्द भने, हरेक स्मारिका पसलमा तपाईं नै आश्चर्य चयन र कहाँ यो टर्की मा आफ्नो छुट्टी कसरी थियो सम्झाउने उनको घर, ल्याउन सक्छ।
अन्य कुराहरु, त्यो भोजन तालिका मा बसे, तपाईं यसलाई अत्यधिक असामान्य खस्ता ब्यागेल्स, कुनै कम तिल को बीउ संग छर्कियो पाउन सक्छ। यो मिठास "simit" भनिने टर्की राष्ट्रिय उत्पादन हो। यो लगभग कुनै पनि क्षेत्र प्रदान गर्दछ, र तपाईं दौरे सक्षम हुन बाटो मा खान्छन्। Simit lengthwise कटौती र धब्बा बाख्रा पनीर वा चकलेट पेस्ट। तर पनि fillers नगरी स्वादिष्ट डोनट, किनभने यसको तैयारी, विशेष खानाको लागि। साथै, माथि सूचीबद्ध रूपमा, तुर्क नास्ता तेल वा वनस्पति तेल seasonings सबै प्रकार को वाहेक संग खुवाउनुभयो। यो सेतो रोटी डुबो र तुरुन्तै आफ्नो मुखमा पठाए। यो पकवान स्वास्थ्य को लागि धेरै राम्रो छ, र विशेष खाली पेट मा स्वागत को लागि उपयुक्त छ। त्यसैले प्राकृतिक शरीर सफाई छ।
त्यहाँ एक टर्की पकवान "लेख्ने" छ, - रूसी प्यानकेकहरू लागि विकल्प, तर पारंपरिक खमीर आटा (रूसी Pies लागि उपयुक्त छ जो) को बनेको छ, तेल मा तला र जाम संग सेवा गरे।
साँच्चै कदर टर्की को भोजन मात्र स्थान मा सम्भव छ।
तर यसको दुर्घटना परेशान बिना टर्की लिए ठाउँमा रहन गर्न, यो आवश्यक खाद्य स्वच्छता केही नियमहरू पालन गर्न छ:
1) नल पानी पिउन नगर्नुहोस्, मात्र बोतलबंद।
2) यो तपाईं खुला जार देखि खन्याउन कि पेय पदार्थ पिउन छैन राम्रो छ, तिनीहरूले गरिब गुणस्तर को हुन सक्छ। मात्र पेय र रस, मूल मूल प्याकेजिङ्ग गरिएका छन् जो पिउन।
3) एक नियमको रूपमा, ठूलो होटल मा रेस्टुरेन्ट व्यञ्जन धेरै ठूलो परिमाणमा तयार छन्। तिनीहरूले सधैं राम्रो काम वा शक्ति हतार मा पकाएको बाहिर बारी गर्छन्। मासु वा माछा को कुनै तला टुक्रा खान छैन, तिनीहरूले तपाईंको स्वास्थ्य को लागि असुरक्षित हुन सक्छ।
म तपाईंलाई एउटा सुखद रहन चाहनुहुन्छ!
खार्किव क्षेत्र सबैभन्दा रोचक ठाँउहरु: फोटो र विवरण सूची
Sudak को अस्पताल: स्थान, समीक्षा, फोटो
भियतनाम जलवायु र क्षेत्र यसको विशेषताहरु
के तपाईं र के विमान सँग लाग्न सक्छ सक्दैन
असामान्य Azov अभियान
रोचक र उपयोगी रगत लिपिड प्रोफाइल के हुन सक्छ?
के अवधि मा बच्चा सार्दा सुरु, र तपाईं जस्तै क्षणमा मा ध्यान गर्नुपर्छ?
Cyclist आर्मस्ट्रांग: एक जीवनी र क्यारियर
कार्यात्मक जिम्मेवारी उपचार कक्ष नर्स, उनको अधिकार र जिम्मेवारी
Minecraft सुन्दर भवनहरु
जहाँ सामान्य ब्रीम कसरी किनारमा देखि यो भेट्टाउने?
स्मार्टफोन Nubia Z9 मिनी: विनिर्देशों, फोटो र समीक्षा
सर्वश्रेष्ठ keylogger। लागि keylogger "एन्ड्रोइड"